IPhini leJaji Elikhulu uRaymond Zondo – ubuyisela ukusebenza komthetho | Scrolla Izindaba
IPhini leJaji Elikhulu uRaymond Zondo – ubuyisela ukusebenza komthetho
INingizimu Afrika inokuningi okufanele ibonge ngakho iPhini Lejaji Elikhulu uRaymond Zondo.
Kuyamfanela ukuthi igama lakhe lihlale lihambisana nokubuya komthetho ngemuva kweminyaka yokubanjwa kombuso.
IKhomishini yakhe izohlonishwa ngemizamo yayo yokuthola ubukhulu bangempela benkohlakalo ngaphansi kukaMengameli wangaphambilini uJacob Zuma.
Uzokhumbuleka futhi ngokuzimisela kwakhe ukuthi uZuma aziphendulele ngokufakaza kwikhomishini ayiholayo, uZuma ayalelwe ukuba ayisungule ngowayenguMvikeli woMphakathi uThuli Madonsela.
Ebizwa ngokusemthethweni yiKhomishini Yezobulungiswa Yezokuphenya Ngezinsolo Zokubanjwa Kombuso, yaziwa ngabantu abaningi njengeKhomishini kaZondo.
Kuyancomeka kuye ukuthi, iphini lejaji elikhulu (igama elithi iPhini Lejaji Elikhulu lingaba yiRBG yaseNingizimu Afrika) alikaze liziqhayise ngalo kule nqubo ebalulekile yokweqa izinga lenkohlakalo.
Indoda ezithobile futhi ecabangelanayo, ibambe umugqa oqinile wezomthetho emsebenzini wekhomishini, kufaka phakathi ukuhlaselwa okugcwele ngqo ngabammeli bakaZuma ukumenza azihoxise.
Yize uZondo azala ingane nodadewabo womunye wamakhosikazi kaZuma (kudala ngaphambi kokuthi abakwaZuma bahlangane futhi bashade), lo owayengumengameli wathi bangabangani, uZondo wamphikisa wathi: “Ayisilo iqiniso le nto yokuthi singabangani… Mina noMnumzane uZuma asihlangani ndawonye futhi asikaze sihlangane ndawonye.”
Alihlonishwe iPhini leJaji Elikhulu, uZondo!